Harena an-kibon’ny tany : Misokatra ho an’ny Malagasy ny lalam-barotra any Inde -
AccueilSongandinaHarena an-kibon’ny tany : Misokatra ho an’ny Malagasy ny lalam-barotra any Inde
Nampahafantarina tamin’ny alalan’ny valandresaka natao ho an’ny mpanao gazety natao teto Antsirabe ny alakamisy 1 janoary 2018 teo fa nahazo lalam-barotra any Jaipur-Inde ny mpandraharaha misehatra eo amin’ny lalam-pihariana harena an-kibon’ny tany. Ny CNM na « Comité National des Mines » Vaomieram-pirenena misahana ny harena an-kibon’ny tany no nahazoana io lalam-barotra io. Ara-tantara dia efa tamin’ny taona 1991 no niforona ny CNM, fa noho ny tsy fisian’ny vola henti-miasa dia niato teo ny vaomiera. Ny taona 2005 indray no niverina niasa ny CNM ka lany ho filohany ingahy Andriatsira Rakotoarisoa, izay mbola mitana ny toerany maha filoha azy hatramin’izao. Nametraka Vina sy tanjona maro ny CNM tamin’izany, ka isan’izany izao fisokafan’ny lalam-barotra any Jaipur- Inde izao. Noho ny tohana nomen’ny CNM dia afaka nandray anjara tamin’ilay fampirantiana lehibe momba ny vato natao tao Jaipur-Inde ny mpandraharaha malagasy. Nisy 30 isa teo ny trano heva an’i Malagasy tamin’ny hetsika tao Jaipur-Inde, ka ny 23 tamin’izy ireo dia voalaza fa avy eto Vakinankaratra avokoa. Io no nitarika nanokatra sy nanome avo ity lalam-pihariana amin’ny harena an-kibon’ny tany ity ho an’ny mpandraharaha malagasy. Afaka niresaka sy nifanakalo mivantana tamin’ireo mpandraharaha vahiny tao Jaipur mantsy ireo mpandraharaha nandritra io fampirantiana io. Ny 8-9-10 janoary 2018 teo ny fampirantiana tao amin’ny hotel le Marriot tany Jaipur-Inde, maro no afa-po sy liana tamin’ny vokatra nampirantin’ny Malagasy. Fantatra fa 150 teo ny trano heva nandritra io hetsika io, ka ny 30 tamin’izy ireo dia an’ny Malagasy. Porofon’izany hoy ny fanazavana ny fahazoana sahady kaomandy maro be.
Antom-pisian’ny CNM moa ny fahatsapana fa tokony hisy sehatra iray hihaonan’ny mpandraharaha mitantana ny harena an-kibon’ny tany sy ny sehatry ny tsy miankina mba hampiroborobo ity lalam-pihariana ity.